LA OGAADAY: Hal Su’aal Oo Qaab Dalab Ah U Dhigan Oo Uu Neymar Jr Waydiiyay Ciyaartoyda Kooxdiisii Hore Ee Barcelona Markii Uu Dhawaan Ku Booqday Xarunta Tababarkooda. – WWW.Gool24.net
LA OGAADAY: Hal Su’aal Oo Qaab Dalab Ah U Dhigan Oo Uu Neymar Jr Waydiiyay Ciyaartoyda Kooxdiisii Hore Ee Barcelona Markii Uu Dhawaan Ku Booqday Xarunta Tababarkooda.
Laba usbuuc ka hor Neymar jr ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay xarunta Ciutat Esportiva halkaas oo uu ku yaal garoonka tababarka kooxda Barcelona wuxuuna xarunta tababarka Barcelona uu ku soo laabtay isaga oo wata wiilkiisa David Lucca waxayna ciyaartoyda Barcelona ku noqotay mid u ay u qaadan waayeen in Neymar oo maalintii uu ka baxayay kooxdooda si muran wayni ku jiro xaruntan ugu macasalaameeyay in uu si deg deg ah ugu soo booqday.
Laakiin wargayska Sport ee magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa ugu danbayn helay su’aal uu Neymar Jr waydiiyay ciyaartoyda kooxdiisii hore ee Barcelona taas oo uu u dhigay qaab dalab oo kale ah. Wargayska Sport ayaa sidoo kale faah faahin ka bixiyay qaabkii ay xaalada Neymar ahayd markii uu xarunta Barcelona uu ku soo booqday kooxda Valverde.
Ugu horayn waxa uu wwargayska soo qaatay qaabkii uu Neymar Jr uu weerarada badan ee afka ah ugu qaaday madax waynaha kooxda Barcelona ee osep Maria Bartomeu iyo boodhka Camp Nou iyo waliba sida lama filaanka ah ee uu waqti kooban kadib isaga oo xaalad taas ka duwan ku jira uu xarunta tababarka ugu soo laabtay.
Sport ayaa sheegay in Neymar Jr uu xarunta tababarka Barcelona yimid isaga oo ku jira xaaladii qosolka iyo farxada badan lahayd ee looga bartay, wuxuuna ciyaartoy kasta oo kooxda kowaad ee Barcelona ah uu galiyay laabtay isaga oo si gacaltooyo leh u salaamay.
Kadib kaftan iyo sheeko waxa uu Neymar ciyaartoyda kooxdiisii hore ee Barcelona uu waydiiyay: “Miyaad idinku dib ee soo celin kartaan?” Wuxuuna hadalkan sheegay isaga oo sidii looga bartay qoslaya balse aan la ogayn haddii uu aragtidiisa dhabta ah qarsanayay iyo inay xaqiiqo ka ahayd.
Neymar Jr ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay kooxdiisa cusub ee PSG balse waxaa markasta soo baxaya warar badan oo sheegaya in uu haddaba ka niyadjabay qaabka tababarka Unai Emery isla markaana aanu hadda qabin wax dhiiro gali ah.
Neymar ayaa khilaaf wayn la galay Cavani laakiin xidhiidhka sii xumaanaya ee uu la leeyahay macalinka kooxdiisa ee Emery ayaa muujinaysa in aanu ku faraxsanayn PSG, wuxuuna wargayska Sport hore u qoray in booqashadii uu Neymar ku yimid xarunta tababarka Barca ay muujinaysay in uu qalad ahaa go’aankii uu ku baxay.